China China Sepiolite Fibre for Brake pads orinasa sy mpamatsy | Huabang
China Sepiolite Fibre ho an'ny brake pad
Fampiharana: Izy io dia ampiasaina amin'ny fandavahana, solika, fanafody, fanaovana labiera, fitaovana fanorenana, pestiside, zezika simika, vokatra fingotra, frein, sns.
Ny fibra sepiolite dia karazana fibre mineraly voajanahary, izay karazana mineraly sepiolite fibrous, antsoina hoe α - sepiolite. Sepiolite dia karazana mineraly silicate rojo misy sosona. Ao amin'ny firafitry ny sepiolite, misy sosona octahedron magnesia mipetaka eo anelanelan'ny tetrahedron oksizenina silisiôma roa, mamorona vondrona rafitra misy sosona 2: 1. Ny sosona tetrahedral dia mitohy ary ny fitarihan'ny oksizenina mavitrika ao amin'ny sosona dia mivadika tsindraindray. Ny sosona octahedral dia mamorona fantsona mifandimby eo anelanelan'ny sosona ambony sy ambany. Ny orientation fantsona dia mifanaraka amin'ny axis fibre, mamela ny molekiola rano, kation metaly, molekiola kely organika sy ny sisa. Sepiolite dia manana fanoherana hafanana tsara. Sepiolite ihany koa dia manana tsara ion fifanakalozana sy catalytic fananana, ary koa ny harafesiny fanoherana, taratra fanoherana, insulation, hafanana insulation sy ny toetra tsara hafa, indrindra fa ny Si Oh ao amin'ny firafiny dia afaka mihetsika mivantana amin'ny organika mba hamokatra organika derivatives mineraly.
Sepiolite koa dia ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny fanadiovana, ny fanodinana superfine ary ny fanovana. Sepiolite dia azo ampiasaina ho toy ny adsorbent, fanadiovana, deodorant, fanamafisana mpiasa, fampiatoana mpiasa, thixotropic mpandraharaha, filler, sns amin'ny rano fitsaboana, catalysis, fingotra, coating, zezika simika, sakafo sy ny indostria hafa. Ankoatr'izay, ny sepiolite dia manana fanoherana sira tsara sy fanoherana avo lenta, noho izany dia azo ampiasaina ho fitaovana fandavahana avo lenta amin'ny fandavahana solika, fitrandrahana geothermal ary lafiny hafa.
Ny fibre Sepiolite dia an'ny fibre mineraly, izay azo avy amin'ny vato mineraly fibra. Ny singa fototra ao aminy dia oxides isan-karazany, toy ny silica, alumina, magnesium oxide, sns. Ny loharanon-karenany dia ny karazana asbestos rehetra, toy ny chrysotile, bluestone landihazo, sns.aluminium silicate fibre, fitaratra fibre, gypsum fibre, karbonina fibre, sns.
1. eo ho eo ny halavan'ny fibre 1.0-3.5mm
2. Savaivony antonony ny fibre 3.0-8.0 μ M
3. fibre fizarana 40 × 30 ~ 40% 60 × 40 ~ 60%
4. fibre mirehitra vector (arakaraka ny filan'ny mpanjifa) <1% (800 ℃ / h)
5. votoaty slag ball < 3%
6. fibre hamandoana afa-po < 1.5%
7. fibre fahafahana 0.10-0.25g/cm3
8. singa asbestos 0
teo aloha: Sodium Bentonite
Manaraka: Fandokoana mica flakes ho an'ny gorodona epoxy
Sepiolite fibre ho an'ny fanorenana
Sepiolite fibre ho an'ny afo coating
Fibre Sepiolite ho an'ny fitaovana friction
Mamirapiratra maro loko ao anaty vato maizina ho an'ny zaridaina
4A 5A 13X Zeolite sivana molekiola ho an'ny oksizenina